ဘဲတူဖျံတူကောင် - ဝီကီပီးဒီးယား
၀၄:၃၁၊ ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ နေ့က 咽頭べさ (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) (စေတနာထားပြီတတ်နိင်သလောက်ထည့်ပေးထားပါမယ်) တည်းဖြတ်သည့်မူ
ဘဲတူဖျံတူကောင်သည် ငါးလည်းမဟုတ်၊ ကြက်ငှက်လည်းမဟုတ်၊ ဖျံဟုလည်း လုံးလုံးလျားလျား မခေါ်သာ၊ တွားသွားသတ္တဝါဟုလည်း မဆို နိုင်သော်လည်း ထိုသတ္တဝါလေးမျိုးတို့၏ အနေအကျင့် အသွင်အပြင်များ ရောထွေးရှိနေသည့် ထူးဆန်းသော သတ္တဝါမျိုးဖြစ်သည်။ ဘဲနှုတ်သီးကဲ့သို့နှုတ်သီးပြားပြားရှိ၍၊ ခြေချောင်းလက်ချောင်းများ အကြား အရေပြားဖြင့် ဆက်နေကာ၊ ဖျံ၏ အမွေးမျိုး၊ ဖျံ၏ အမြီးကဲ့သို့အမွေးထူ အမြီးပြားကြီးမျိုးလည်း ရှိပြန်သဖြင့် ထိုသတ္တဝါကို ဘဲတူ ဖျံတူကောင် ဒပ်ဗီး (သို့မဟုတ်) ဘလက်တီပတ် ဟု ခေါ်လေသည်။
ဘဲတူဖျံတူကောင်သည် ဩစတြေးလျတိုက် တောင်ပိုင်းဒေသများနှင့် တက်စမေးနီးယားစသော အနီးအနား ကျွန်းများ၌သာ တွေ့ရှိရသည်။ ရှေးကျသော သတ္တဝါများ၏ အသွင်အပြင် အင်္ဂါလက္ခဏာများရှိ၍၊ သက်ရှိ သတ္တဝါများ တဖြည်းဖြည်း တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာပုံကို သာဓကပြုသည့် သတ္တဝါဖြစ်လေသည်။ ထိုသတ္တဝါသည် ဘဲများ၊ ကြက်များ၊ မိကျောင်းများကဲ့သို့ဥများ ဥသော်လည်း၊ အကောင်ငယ်များ ပေါက်လာသည့်အခါ နို့်တိုက်သည်။ ဘဲတူဖျံတူကောင်၏ ကိုယ်အလျားသည် ၁၈ လက်မမှာ လက်မ ၂ဝ အထိရှိ သည်။ ဝမ်းဘဲမျိုးတို့၏ ခြေထောက်ကဲ့သို့ခြေချောင်းများအကြား အရေပြားဖြင့် ဆက်နေသဖြင့် လည်းကောင်း၊ လှော်တက်ပုံနှင့် ဆင်ဆင်တူသော အမြီးပြားရှိသဖြင့် လည်းကောင်း ရေကူးခြင်းနှင့် ရေငုပ်ခြင်း၌ အလွန်ကျင်လည်လေသည်။ နူးညံ့ချောမွတ် သိပ်သည်းသော သားမွှေးရှိသဖြင့် ယင်း၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ရေမတင်ချေ။ နားရွက် အင်္ဂါကို ထင်ထင်ရှားရှား မမြင်တွေ့နိုင်သော်လည်း ယင်းတို့သည် အလွန်နားပါးကြသည်။
ယင်း၏ နှုတ်သီးသည် အရေပြားဖြင့် ဖုံးအုပ်လျက်ရှိ၍၊ ထိုနှုတ်သီး၏ ထိပ်ဖျားတွင် နှာခေါင်းပေါက်များရှိသည်။ ရေအောက်သို့ငုပ်လျှိုပြီးသော် ရေအောက်မှ လည်းကောင်း၊ ရွှံ့နွံထဲမှ လည်းကောင်း၊ ပိုးမွှား၊ တီကောင် စသည်တို့ကို နှုတ်သီးဖြင့် ထိုး၍ ရှာဖွေစားသောက်ကြသည်။ ငယ်စဉ်က သွားများ ပေါက်သော်လည်း၊ မကြာမီ ထိုသွားများ ကျွေသွားကာ၊ ယင်းတို့အစား ချိုသားကဲ့သို့မာကြောသော သွားနှင့် ဆင်ဆင်တူသည့် အချွန်များ ထွက်လာသည်။ အစာများကို ထိုချို သွားများနှင့် ဝါးစားသည်။ ခြေလေးချောင်းရှိရာ၊ ယင်းခြေတို့၌ ချွန်မြသော ခြေသည်းများရှိသည်။ ဘဲတူဖျံတူကောင် အမသည် ထိုခြေ သည်းများဖြင့် မြစ်ချောင်းကမ်းပါးတွင် လိုဏ်ခေါင်းတူး၍ နေတတ်သည်။ ထိုလိုဏ်ခေါင်းအဆုံးတွင် ဥများ ဥသည်။ ဥများသည် မြွေဥ၊ လိပ်ဥများကဲ့သို့အခွံပါးသည်။ ဥများမှ အကောင်ငယ်များ ပေါက်လာသောအခါ၊ မိခင်ဖြစ်သူသည် ယင်း၏ အမြီးဖြင့် အကောင်ပေါက်စ ကလေးများကို ပိုက်ထွေးပြီးသော် နို့တိုက်လေ့ရှိသည်။ အကောင်ငယ်များ ပေါက်ပြီးစအချိန်တွင် သားမွှေးမရှိသေးချေ။ ယင်းတို့သည် အသိုက်တွင် လပေါင်းများစွာကြာအောင် နေတတ်ကြလေသည်။
ဘဲတူဖျံတူကောင် အထီး၏ နောက်ခြေချောင်းများတွင် ဆူးရှိသည်။ ထိုဆူးများသည် အဆိပ်ဂလင်းများနှင့် ဆက်သွယ်နေသည်။ ယင်းတို့အား ရန်မူလာလျှင် ကုတ်ခြစ်၍ အဆိပ်တက်စေခြင်းဖြင့် ရန်ကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယင်းတို့သည် အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့၍ ကြောက်တတ်သော သတ္တဝါများဖြစ်ကြသည်။ ယင်းတို့အား ဖမ်းမိလျှင်လည်း ကြောက်တတ်လွန်းလှ၍ မကြာမီ သေကြသည်။ ယင်းတို့၏ အသံသည် ခွေးပေါက်စကလေးများ၏ ဟိန်းသံနှင့် တူလေသည်။
ဘဲတူဖျံတူကောင်တို့ကို ယခင်က သားမွှေးအလို့ငှာ ဖမ်းဆီးခဲ့ကြသည်။ ယခုမူ ဩစတြေးလျား အစိုးရက ဖမ်းဆီးခွင့် မပြုတော့ချေ။
ယင်းတို့သည် နို့တိုက်သတ္တဝါများအနက် မွန်နိုထရီးမာတာ (ခေါ် ) အနိမ်ဆုံး မျိုးစဉ်၌ ပါဝင်ကြသည်။ ဘဲတူဖျံတူကောင်ကို သတ္တဗေဒ(ပါဏဗေဒ‎) အလိုအားဖြင့် အော်နီသိုရင်းကျူး အတီနပ် ဟုခေါ်သည်။
↑ Hall, Brian K. (March 1999). "The Paradoxical Platypus". BioScience 49 (3): 211–8. doi:10.2307/1313511.
↑ Duck-billed Platypus။ Museum of hoaxes။ 21 July 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The Duck-Billed Platypus, Platypus anatinus." (1799). The Naturalist's Miscellany 10 (CXVIII): 385–386. doi:10.5962/p.304567.
↑ Platypus facts file။ Australian Platypus Conservancy။ 13 September 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘဲတူဖျံတူကောင်&oldid=561283" မှ ရယူရန်
ဩစတြေးလျတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။